प्रधानमन्त्रीज्यु, झुटा मुद्दा चलाई पीडितलाई दोषी बनाउने कार्य तत्काल रोकियोसः प्रभु साह : RajdhaniDaily.com -
Home राजनीति प्रधानमन्त्रीज्यु, झुटा मुद्दा चलाई पीडितलाई दोषी बनाउने कार्य तत्काल रोकियोसः प्रभु साह
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रदेश नम्बर २ का अध्यक्ष प्रभु साहले झुठा मुद्दा चलाएर निर्दोषलाई फसाउने काम स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।
रौतहट क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका अध्यक्ष साहले रौतहटमा भएका दुई घटनाप्रति आक्रोशित हुँदै विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
रौतहटको दाजुभाइ इट्टा उद्योगका संचालक रामबाबु चौधरी सपरिवारसहित उद्योगका कामदारहरुमाथि आक्रमण भएको र पछि उनीहरुमाथि नै मुद्दा दर्ता भएकोप्रति अध्यक्ष साह आक्रोशित भएका हुन् ।
रौतहटकै ईशनाथ नगरपालिकाका मेयर सन्तोष मेहता तथा नेकपा नगर अध्यक्ष मोहन मेहतालाई संलग्नता नै नभएको मुद्दामा पक्राउ पुर्जी काटेपछि प्रहरी विवादित बनेको छ ।
‘यही चैत्र २ गते रौतहटको गरुडास्थित दाजुभाइ इट्टा उद्योगमा सांघातिक आक्रमण भई दर्जनौं व्यक्ति घाइते भएको कुरा सर्वविदितै छ । पीडितलाई न्याय दिलाउनुको सट्टा आज रौतहट जिल्ला अदालतमा इट्टा उद्योगका संचालक रामबाबु चौधरी सपरिवार सहित झन्डै ४० जनामाथि उल्टै डाँका, शरीर बन्धक तथा अपहरण मुद्दा दायर भएको छ । घटनामा नै नभएका विषयमा काल्पनिक वरदात बनाएर अपराधिक कार्यलाई ढाकछोप गर्न झुठा मुद्दा चलाउने गृह प्रशासनको कार्य निन्दनीय छ । अहिलेको २१ औं शताब्दीमा लोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेको नेपालमा यस्ता जंगली हर्कत किमार्थ स्वीकार्य छैन’ अध्यक्ष साहको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस विषयमा नेपाल सरकारले छानबिन गरी दोषीलाई तुरुन्त कारवाही गर्नुपर्ने माग उनले गरेका छन् ।
‘गत हप्ता नेपाल प्रहरीद्वारा रौतहटकै ईशनाथ नगरपालिकाका मेयर सन्तोष मेहतालगायतका केही निर्दोष व्यक्तिहरुलाई लागुऔषध मुद्दामा पक्राउ पुर्जी पठायो । अपराधिक कार्यमा कुनै संलग्नता नै नभएको मेयरलगायतका निर्दोष व्यक्तिलाई बिना प्रमाण पक्राउ पुर्जी काटिएको स्तिथी छ । तथ्य र प्रमाण बिना गलत नियतबाट नगरको मुख्य नेतृत्वलाई यसरी ह्रासमेन्ट गर्नु कतिको न्यायसंगत छ । अहिले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि जारी लकडाउनमा ईशनाथ नगरपालिका अस्तव्यस्त छ ।’ अध्यक्ष साहको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मेयर विहिन स्थितिमा कोरोना पोजेटिभ बिरामीको उपस्थितिले आम जनता आतंकित एवम् त्रसित अवस्थामा रहेको बताउँदै उनले गम्भीर अवस्था निर्माणको जवाफदेहिता कसले लिने ? के नेपाल प्रहरी यस्तो विषयमा गम्भीर हुनुपर्दैन ? प्रश्न गरेका छन् । यस्तो बिषयमा गृह मन्त्रालयको उनले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षणसहित भनिएको छ, ‘उपरोक्त घटनाहरु एउटा उदाहरण मात्र हुन् । अहिले कोरोना महामारीसंग देशमा कालोबजारी तथा झुठा मुद्दाको बिगबिगी नै चलेको छ । अपराधिक घटनामा पीडितहरुलाई नै दोषी बनाउने दुस्प्रयास हुँदैछ । घटना नै नभएपनि बनाबटी वरदात खडा गरेर भएपनि झुठा मुद्दा चलाउने जस्ता जंगली कार्यको अभ्यास हुन खोजिरहेको छ । तसर्थ यस्ता गलत कार्यलाई तुरुन्त रोक्न म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
भर्खरै Dhruba Lamsal - May 7, 2020 0
काठमाण्डाै‌ । नेपाल सरकारलाई स्वीस सरकारले रोश डायग्नोस्टिकको कोभिड–१९ परीक्षण गर्ने ३० हजार थान टीवमोलविल पीसीआर टेष्ट किट हस्तान्तरण गरेको छ । त्रिभुवन विमानस्थलमा आयोजित...
Not-to-be-missed Dhruba Lamsal - March 29, 2020 0
प्रमुख Dhruba Lamsal - August 31, 2020 0
इटहरी । दक्षिण भारतमा रहेको चारधाम तीर्थस्थलको भ्रमण गर्न गएका सुनसरीका दश जनाको दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ । माघ २३ गते इटहरीबाट एक महिने...
झापामा पनि कोरोना भाइरस देखियो, ६२ वर्षीय वृद्धमा कोरोना संक्रमण पुष्टि
काठमाडौं । झापामा पनि पहिलो पटक कोरोना संक्रमणको बिरामी भेटिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार झापाका ६२ वर्षीय वृद्धमा कोरोना संक्रमण पुष्टि...
Not-to-be-missed Kumar Raut - July 13, 2020 0
काठमाडौं । नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणसँगै कलाक्षेत्र ठप्प छ । चलचित्रजस्तै मोडलिङ क्षेत्रमा अहिलेको अवस्थामा ठप्प भएको मोडलहरू बताउँछन् । निरन्तर -याम्प फेसन सो...
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकामा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या चार हजार ८८६ रहेको छ । हाल सङ्क्रमित भएकामध्ये एक हजार २६२ जना निको भएका छन् भने...